Ukushiya esikhundleni ingozi nemiphumela
Abaningi nizwile ezindabeni ukuthi, ngemva ukungqubuzana yabahamba ngezinyawo noma ezinye izingozi, abanye abashayeli udumo abavuma kokushiya yesehlakalo. Lokhu kwenziwa ngethemba lokuthi ngeke balithole, futhi ngaleyo ndlela sizokwazi ukugwema umthwalo. Kodwa njengoba umthetho, abashayeli ezifana nokuthi isimo siya siba sibi kakhulu. Kuzokwenzekani zokushiya yesehlakalo? Umthwalo enikeziwe emthethweni.
Article 12,27 kweKhodi Administrative, ikakhulukazi ingxenye yayo yesibili sihlinzekela bokuhlukaniswa amalungelo yokushayela (kuze kuphele iminyaka eyisithupha), ubani wavuma ukushiya endaweni yengozi noma ukuboshwa, okungase kuhlale isikhathi esingengaphezu kwezinsuku ezingu-15. Ngokomthetho, umshayeli - umuntu ngubani osebenzisa imoto lena, kungakhathaliseki kukhona lapho esigabeni lesi isilawuli ezokuthutha noma cha. Lokhu kusho ukuthi uma umuntu akanayo izincwadi zokushayela nhlobo, uzobe ehamba ngemoto ingena engozini babaleke, yena uzoba nesibopho kokuya ingozi njengoba umshayeli. Uma umuntu onjalo akuyona ilayisensi yokushayela, inkantolo uzoqoka aboshwe, njengoba ukuphuca kuye lutho.
Futhi lokho okushiwo lapho thina ithi kokuya ingozi? Lokhu kusho ukuthi umshayeli ngemuva kokuthi ikhomishana yengozi (hit ukungqubuzana abezinyawo nomunye imoto, phansi impahla emotweni yakhe kothile, njll) akuzange kumenze traffic abasebenzi amaphoyisa ayengenayo ukwesekwa okudingekayo ukuze izisulu, washiya okungaziwa ukuthi isiqondiso futhi lutho emuntwini.
Kodwa uma umshayeli imoto yakhe waxosha amalungu kule ngozi eseduze esibhedlela bese ebuya, noma wathuthela kwenye indawo ukuze kuvuleke kwamaloli nezimoto uma zidlula, okuyinto edala isithiyo - izenzo ezinjena ziwuphawu akuthathwa njengephutha Ukuyekwa ingozi endaweni yesehlakalo. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi ukuthuthela kwenye indawo, umshayeli ke kumelwe ushayele amaphoyisa omgwaqo ukudweba circuit, kanye akhombisa isondo lemoto. Lokhu kwenziwa ukuze ke wakwazi sokusukuma futhi ahlaziye yonke imicimbi.
Indlela kulungiselelwa umshayeli, okuyinto waqhubeka kokuya ingozi? Isikhathi komkhawulo kule ububi izinyanga ezintathu. Lokhu kusho ukuthi uma amaphoyisa abazange banqume ukuthi iBhayibheli ungubani futhi ukuphi isephulamthetho izinyanga ezintathu, emva kwalokho ngeke ukulidonsa ngenxa kokushiya yengozi. Kodwa lokhu akusho ukuthi ngeke nxephezela yomonakalo. Lapho watholakala, isisulu angafaka isikhalazo enkantolo futhi Wabuyisa yonke umonakalo ngendlela civil. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi umshayeli icala baya bakuthukusa, kungase futhi adalule umonakalo zokuziphatha ukuze usayizi esikhulu. Ngakho kubalulekile ukuba ucabange izikhathi eziningana ngaphambi kokukhetha ukushiya endaweni yengozi. Singeke thina phansi iqiniso lokuthi izisulu ungaqonda, kulesi simo izindlela ngokuphelele emthethweni. Ngakho-ke, ngezenzo zabo futhi kufanele baphendule sihlale womuntu. Uma ubulokhu obhekene ingozi, kungcono ushayele amaphoyisa omgwaqo ukusiza izisulu (uma edingeka) bese ukubiza ummeli, abazokutshela indlela engcono kakhulu ukuqhubeka. Ngakho wena nje wenze kube lula isimo sakho.
Ukuvimbela yezizathu zebhizinisi ezigunyaziwe noma kweminye imisebenzi ngaphansi Article 169 of Criminal Code
Bheka owesifazane: amadoda bavame emacaleni amabi kakhulu obugebengu bedle abesifazane
Izinhlobo dispositions emthethweni lobugebengu: izibonelo. Concept futhi izinhlobo dispositions futhi unswinyo
Article 208 of Criminal Code: inhlangano i kumiswa ahlomile emthethweni noma iqhaza kulo
Umonakalo okukhulu Criminal Code, Article 167. Phawula
Twining cabochon ubuhlalu - isigaba master Wabasaqalayo
Air yokuzijwayeza phezu emidwebweni (izithombe)
Yini kungaba isipho umama
Tours Medical kwa-Israyeli: izinga, ukuthembeka, ukutholakala,
Ukuxega Kungani inhlabathi ubizwa ngokuthi "ngenkasa ezomile"? Kungani ibizwa kanjalo?
Umlingisikazi Irina Malysheva: Biography, Filmography kanye nempilo yakho
Maral luyimpande yazo zonke izifo
Volumetric iphethini izinaliti: isikimu kanye nencazelo
Yikuphi wamafutha isetshenziselwa Ukwenyela?
Izikuta "Decathlon" abadala kanye nezingane